Carbon eriri VS. Faiba glaasi tubing: Nke dị mma?
You maara ihe dị iche na eriri carbon na faiba glaasi? I makwa na otu onye ka ibe ya mma? Faiba glaasi bụ n'ezie okenye nke ihe abụọ. Emebere ya site na iko na-agbaze ma na-amịpụ ya n'okpuru nrụgide dị elu, wee jikọta ihe ndị mejupụtara ya na ...
Carbon Fiber na nke Aluminom
Carbon fiber na-anọchi aluminom n'ọtụtụ ngwa ngwa na-arịwanye elu ma na-eme ya n'ime iri afọ ole na ole gara aga. A maara eriri ndị a maka ike ha na enweghị ike ha na oke ọkụ. Ejikọtara eriri eriri carbon na resins dị iche iche iji mepụta ihe ...
Carbon eriri akpa tubular owuwu bara uru maka ọtụtụ ngwa. Ya mere, ọ gaghị eju anyị anya na ihe ndị pụrụ iche nke carbon fiber tubes na-etinye ha n'ọchịchọ dị elu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. More na mgbe mgbe ụbọchị ndị a, carbon fiber tubes dochie ígwè, titanium, ma ọ bụ ...
Ogwe mmiri Carbon Fiber na-enye osisi nri zuru oke maka nhicha windo ọkachamara taa
Taa ọkachamara na-asacha windo ma na-ehicha ihe nwere nkà na ụzụ nke ha nwere dị ọtụtụ afọ n'ihu nkà na ụzụ site na afọ iri gara aga. Teknụzụ ndị kachasị ọhụrụ na-eji eriri carbon maka okporo osisi na-enye mmiri, nke a emeela ka ọrụ nke nhicha windo ọ bụghị naanị mfe ma dị mma. Mmiri nri osisi bụ ...
Kedu akụrụngwa nke nhicha windo chọrọ?
Ihichapu windo abụghị ihe ọzọ. Edebere ya n'ezie maka ndị ọkachamara nwere ngwa ọrụ na akụrụngwa kwesịrị ihicha windo ọ bụla. Ma ịchọrọ ihicha windo nke ụlọ gị ma ọ bụ mepee windo nhicha ọrụ, ọ dị mkpa ịmara ngwaahịa dị mkpa na ịkwadebe ...